Ọdịnihu nke Ọganihu E-Business Suite na Nwelite Mmelite na Afọ Ọge
Ụlọ ahịa azụmahịa kpalite mmasị nke ụlọ ọrụ maka ihe ndị ziri ezi. Oracle bụ onye ọsụ ụzọ nke mmepe, mgbasa ozi na ahịa nchekwa data nchekwa, usoro nhazi igwe ojii na usoro mmemme nke Enterprise. Nzukọ ahụ na-anọgide na-emecha nchịkwa Oracle E-Business Suite iji mee ya n'ọdịnihu-njikere. Ọhụụ nke 2015 nke na-ahụ maka ọhụụ nke afọ XNUMX gbanwee ghọọ onye nrụpụta software kachasị ọhụrụ, mgbe Microsoft gasịrị. Ị nwere mmasị dị ukwuu n'ịmara otú ọ ga-esi lee anya ma rụọ ọrụ n'ime afọ ole na ole? Nke a bụ akụkọ dum, kwuru na mkparịta ụka:
Kedu ihe bụ Ọdịnihu nke E-Business Suite?
Imelite kachasị na afọ ndị na-abịanụ
Ọrụ nke onye nchịkwa E-business Suite na ụlọ ọrụ:
EBS ma ọ bụ Oracle E-business Suite na-enye ụlọ ọrụ iji rụọ otu ugbo nkesa na otu nchekwa data. EBS gụnyere
SCM - Nchịkọta Nchịkọta Nyefe.
CRM - Management Relationship Company.
Njikwa ụgbọ njem.
Nlekọta ụlọ ahịa.
A malitere usoro EBS nke ọma na 2007 ma kemgbe ahụ ọ bịalarị. Ugbu a, usoro ọhụrụ nke Oracle dị na 12.2.6 ma na-achọ iziga mbipụta na-esote na 2019 ma ọ bụ 2020 na nkwalite dị ukwuu.
A malitere usoro EBS na 2007 ma ebe ọ bụ na ọ bịawo. Ugbu a, usoro ọhụrụ nke Oracle dị na 12.2.6 ma na-achọ iziga mbipụta na-esote na 2019 ma ọ bụ 2020 na nkwalite dị ukwuu.
1. Nzọụkwụ abụọ kwalite:
Anyị kwesịrị ịdị njikere ịgba àmà nke ọma abụọ hapụ 12.2.7 na 12.2.8 site na 2019.
2. Ígwé ojii siri ike:
Oracle na-akwadebe maka inye igwe ojii nchebe nchebe nye Agha ma ọ bụ ngalaba gọọmentị bụ ndị na-enweghi obi abụọ ịkwaga ọrụ ọrụ igwe ojii. Ihe omuma nke ndi mmekorita ndi a na - acho na egwu egwu na Oracle na - akwusi maka 12.3 weputara EBS nke nwere ike kwadoro maka 100% ogwu nke echekwa data.
3. Ọdịnihu bụ igwe ojii:
Nzukọ ahụ na-etinye uche n'itinye SaaS (ọrụ nchịkọta software) dị ka ụlọ ọrụ nwere ike iji 2030 mee ihe ọmụma dị egwu. Godwin si Oracle hotara ụlọ ọrụ, bụ nke na-aga na EBS n'oge, ga-ahụ ka a na-etinye ndị ọrụ SaaS ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Ntucha akwụkwọ, njikwa azụmahịa, ịkwụ ụgwọ ụgwọ, nchịkwa akụkọ, nchekwa nchekwa igwe ojii bụ ụfọdụ modulu, nke a ga-etinye n'oge na-adịghị anya na EBS. SaaS nke nwere ọgụgụ isi na-eji nke Oracle, na-emetụkwa aka n'isi iji hụ na arụmọrụ ka mma na nke ọma.
4. Nchịkọta Predictive:
Nkà mmụta sayensị bụ ihe na-ekpo ọkụ n'oge a. Oracle na-arụ ọrụ ya na SaaS ọrụ na ike Nkọwa Nlekọta maka njirimara management na ụlọ ọrụ. A na-ekwu na ọrụ ọhụrụ ahụ dị oke nchịkọta akụkọ ma ọ ga-eme ka mụọ igwe.
5. Ndabere ekwentị:
Igwe ngwanrọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ Oracle na ndị na-asọmpi na nso nso. EBS bụ otu ụzọ ahụ na Oracle na-agbali ịbanye n'ime Mobile Apps ma tinyekwuo n'ígwé ojii ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ.
Kedu otu esi echepụta ọrụ dịka onye ọkachamara EBS?
Site na Ọhụụ na-ekwusara nnukwu ụlọ ọrụ EBS na ụlọ ọrụ, EBS dị mkpa ka a zụlite ya na oke. Ngwa maka Oracle kwadoro ọkachamara na-ebili maka ọhụụ nkwalite ọhụrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bu n'obi ịmalite ọrụ ọkachamara dịka onye ọkachamara Oracle EBS, ị ga-aga maka Nkwekọrịta Oracle.
Kedu ihe nwere ike ịme mkpuchi Oracle EBS?
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-aga Oracle E-business Suite. N'ihi ya, uru na ihe dị n'ime ihe ndekọ a ga-abawanye, ịchọtakwu ọrụ na nkwụnye ụgwọ dị elu n'afọ 2019 na 2020. Ọ ga-ekpuchi:
Basics nke nchekwa data
Echiche ọma nke RDBMS echiche na SQL.
Aka Nyere 9i ma ọ bụ 10g.
Dịka onye nchịkwa azụmahịa nke E-azụmahịa ị ga - achọ ịrụ ọrụ ndị a:
Kpido ma machibido Data nke kwesiri ka edozie gi maka oru
Zụlite Ọrụ Mgbasaozi na Nkwupụta Ọnọdụ dị ka mpaghara chọrọ
Data nchịkọta site n'iji ọrụ nke EBS eme ihe maka ịkọ akụkọ na nyocha
Na-eme nchọgharị na Oracle Database Architecture maka ịrụ ọrụ zuru ezu
Ịwụnye Oracle EBS Software
Na-echekwa database Oracle
Ijikwa database nke Oracle dịka ị chọrọ nyocha data
Nwee ike inwetaghachi ihe ọmụma
Ịhazi ma kwenyeghachi Ntọala Ndabere
Oracle na-etinye ego na nkwụnye ego E-Business Suite iji wusi ọrụ atọ dị ịrịba ama
Mbugharị na UI mmezi
Oracle na-agba ọsọ na nyocha nke azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị a na-echebara echiche ma na-ewu ntuziaka kpamkpam dabere na ndị ahịa chọrọ. Iji mee ka onye ahịa nweta uru nke Njirimara Ígwé ojii na Ngwa nye ndị ahịa, ma kwe ka ha rite uru nke itinye ego na EBS, ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ mgbe nile. Nbudata na nso nso a agagh enwe ike igbanwe otutu ihe na EBS, ma ana agwa ha ka ha gunyere SaaS na-eto eto na EBS.
I nwekwara ike ịmasị:Ntuzi zuru okena Ndebanye Ọhụụ
8 Ihe Ndị Dị Mkpa I Kwesịrị Ịmara Banyere ITIL Course